Atụmatụ: Etu esi agbanwe onye ọrụ Chromium? | Site na Linux
Atụmatụ: Etu esi agbanwe onye ọrụ Chromium?
Anyị ahụworị otu esi agbanwe ihe Onye ọrụ Firefox y opera ma ugbu a, ọ bụ oge nke chromium, nke m na-eji eme ihe mgbe nile n'ihi Firefox 8 ọ na-eri RAM m.
Enwere ndokwa nke ahụ na-enye gị ohere ime nke a, mana n'ihi mmachi nke ọ tinyela Google (ezigbo nne) a Cuba Enweghị m ike inweta ha ka m wee jiri aka m mee nke a.
Maka nke a, anyị dezie faịlụ ahụ /usr/share/applications/chromium.desktop na anyị na-achọ akara na-ekwu, sị:
Anyị na-etinye ya dị ka nke a:
Ọ bụrụ na anyị mepee taabụ ma tinye:
Anyị nwere ike ịhụ Onye ọrụ nke kari ma obu obere na m ka idi otu a:
Ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere akara m hapụrụ n’elu, ị ga-ahụ na m gbakwunyere Debian m gbanwere Chrome site chromium.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Atụmatụ: Etu esi agbanwe onye ọrụ Chromium?
Ihe 117 kwuru, hapụ nke gị
You ma ihe ndọtị Google ahụ bụ, ekwere m na ha bụ ụmụ nke nne ọjọọ, iji mee ka ọrụ ahụ dị mfe, hahahaha, na kedu nkesa i nwere Firefox 8?
Ugbu a anaghị m echeta aha ndọtị. Na Firefox 8 na Debian, jiri tar.gz
Na ụzọ ahụ (/usr/share/applications/chromium.desktop) Enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla, a hụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka nkesa a kapịrị ọnụ, otu ọrụ ahụ na LMDE na Mint 12 ọ bụghị na echere m na maka Ubuntu na Kubuntu.
Ma eleghị anya, na Ubuntu ọ gbanwere aha .desktop, mana n'ozuzu ngwa niile pụtara na menu ahụ. Chọọ nke ọma, enwere ike ịkpọ ya chrome ma ọ bụ ọdọ dị ka nke ahụ.
Na Ubuntu ọ bụ n'ụzọ nke akọwapụtara na post, naanị na ị pịa nri na akara ngosi ma ọ ga-emepe kwrite (ikpe m), ma ị chọọ akara ahụ, agbanwee m ya ma chromium kwụsị ọrụ, n'ihi na m weghachitere ụkpụrụ dị ka m nwere.
Anọ m na Mint 12 RC.
120MB gbakwunyere 54,9mb gbakwunyere 46mb gbakwunye 41mb gbakwunyere 33mb mee ngụkọta nke 294,9mb site na naanị taabụ atọ mepere
ma na-agbago dị ka usoro nyocha. N'ihi ya, m na-ahapụ Chromium na-aga na-agbalị ọzọ nchọgharị na-erughị vampire.
Adị m anya ọma ma achọtaghị ihe ọ bụla dịka chromium.desktop, agbanyeghị ekele.
Ahụghịkwa m ihe ọ bụla .. Anọ m na Linux mint 12
Chromium na-erepịa RAM karịa Firefox?
Ha na-eri otu ihe ahụ na otu nọmba nke taabụ, na-ahụ otu ibe, yana nhazi otu na otu plugins ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ndị yiri ya.
Zaghachi na hipersayan_x
@hipersayan_x, daalụ maka ego.
Na Kubuntu 11.10, na Firefox 14, ya na 74 (ee, iri asaa na anọ) taabụ meghere, m na-eri otu RAM dị ka Chromium naanị 20-22… Ma ọ bụrụ na m mepee karịa 25 Chromium ọ ga-adịkarị nwayọ.
Otu ihe ahụ na Mint, Firefox gbagidere Chromium.
N'okwu m ọ dịkarịa ala, ọ B true eziokwu na ha na-eri otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, m na-enye captures na data.
N'aka ozo, ahoro m Firefox na oke ogugu ya. Maka ụfọdụ ihe m na-eji Chromium.
Ọ bụ eziokwu na m na-agagharị n'ike, amaghị m onye ọ bụla mepere ọtụtụ taabụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị nku anya 3 ma ọ bụ 4, ikekwe Chromium ga-emere gị.
Ma anyị atụleworị ya na ebe ọzọ.
74 taabụ, ok.
"Amaghị m onye ọ bụla nke mepee ọtụtụ taabụ"... hehehe, m mma ikwu ihe ọ bụla, n'ezie elav (onye ozo Admin onye rue mgbe na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ dị ka m) ga-ekwu ihe dị ka: «Ee! onye a (na-ekwu maka m) mepee ọtụtụ taabụ na ọ naghị ahapụ m bandwit m »… ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ HAHAHA.
Onweghị ihe ọ bụla, m ka na-emepe ọtụtụ taabụ, maka na ka ha mepere m na-agụ ụfọdụ oghe ugbua, m na-emechi ha ... ebe ọtụtụ ndị ọzọ agwụchabeghị.
N'agbanyeghị (olee otú akparị m m haha) ... welcome to the blog 🙂
Enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe na-atọ ụtọ ebe a ... n'agbanyeghị, ịbụ onye ọrụ KDE, ana m ekwe gị nkwa na ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ịchọrọ like
Ọ dị mma, daalụ.
Mana lezie anya, abum nwoke, aliana bu acronym.
(Ọtụtụ mgbe mgbe m kọwapụtara nke a, amaghị m ihe kpatara ha ji agbanwe ụda enyi ha maka nnọpụiche ọzọ).
Oops hahahaha ndo maka nghotahie hahahaha.
Onweghị ihe ọ bụla, ọ dịkwa ihe ọ toụ ịnwe gị ebe a enyi, m na-ekwughachikwa ihe m kwuru ... ọ bụrụ na ịchọrọ KDE, ebe a ị ga-ahụ ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ hahaha
elav ị ka nwere Chromium v14… wow…
Ee, oleekwa? My Chromium v14 na-arụ ọrụ ebube nye m. N'ezie, ahụghị m ihe dị iche na Chrome 15 belụsọ ụlọ tab.
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ maka gị, gbalịa ịgbanwe onye ọrụ gị na chrome / chromium na usoro a, ngwa ngwa ma dịkwa mfe. http://buildall.wordpress.com/2011/05/24/changing-google-chrome-user-agent-string-in-ubuntu-11-04/
Verroo anaghị arụ ọrụ m ma ọ bụ na amaghị m etu esi eme ya ma: S
Nwere ike ịrụ ọrụ a maka google chrome kwa?
ahahaa enweghi m ike ime xD
ana m agbali
Aghọtaghị m ihe na-eme 🙁 M tinyere nke a
Biko mezie m ma ọ bụrụ na m nwere ihe na-adịghị mma 🙁
Na nke ahụ, ị ​​hụghị akara Mint na ọkọlọtọ blog? (N’elu aka nri n’elu)
ọ dịghị ihe ọ bụla 🙁
ọ bụ google chrome ana m eji .. enwere m ike iji obere enyemaka
Uff, M nwalere ya na Chromium (Enweghị m Chrome) ọ rụkwara ọrụ dị ka amara O_O... ka m ichoputa a bit ịhụ ihe m na-ahụ.
nwere tupu ime nyocha .. buru ụzọ ka anyị gbuo obi abụọ ahụ, ka ọ ghara ịbụ na m na-eme ihe adịghị mma ..
Ebee ka ịga iji hazie nke ahụ? i mepere chromium ma gini ka imere?
M meghere ọnụ wee tinye nke a:
Gbalịa nke ahụ iji hụ ihe nsonaazụ ọ na-enye 😀
Onweghị ihe na-eme .. M tinyere nke ahụ n'ọnụ ya wee mepee windo google Chrome ọhụrụ meghere maka m .. mana ọ ka apụtaghị na onye ọrụ gị
Chebe ha na Google ... ¬_¬
Ọ bụ ya mere na anaghị m eji Chrome ma m na-eji Chromium ...
ajajaj ihe dị ịtụnanya bụ na m gbanwere ọkụ na Firefox dịka nkuzi ndị ọzọ na-egosi .. ọ dị mma, ọ na-egosi m akara Linux mint na ihe niile mana chromium na chrome ọ dịghị ma ọlị
hey etinye m na njedebe:
chromium –user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, dị ka Gecko) Linux Mint 12 Chrome / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″% U
Ọ gwara m:
chromium: ahụghị iwu
Kama nke Chromium tinyere / usr / bin / chromium ... nke oma, na Mint ¬_¬ ...
ahahaha i gha achi ochi ... lee ihe o gwara m ugbua:
bash: / usr / bin / chromium: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
WTF !!! … Gbalịa / usr / biini / chromium-ihe nchọgharị ka ịhụ
Ok m tinyere dika odi gwara gi:
/ usr / bin / chromium-browser –user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, dị ka Gecko) Linux Mint 12 Chrome / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″%
Lelee otú onye ọrụ ọrụ si apụta
Ubuntu O_O…. ugbu a ana m ahapụ ...
Amaghidị m ihe distro ị na-eji ... LOL !!
Eleghi anya inwere ike itinye ya na / wdg / chromium / ndabara ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ ... Ana m agbapụ echiche, na Debian ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu nye m 0_0
HALLELUJAH !! \_ O / \_ Ø / \_ O / \_ Ø / -> Emechaala m nweta ya was ọ bụ na m fụgharịrị chromium ejejeje Daalụ
Ugbu a achọrọ m itinye foto na avatar .. yana nke ị nwere.
Chei n'ikpeazụ LOL !!!
Maka foto avatar, ị debanyere aha ebe a na saịtị ahụ?
chere m obere ihe .. Ana m enweta Linux mint mana mgbe m mechiri ọnụ ya, ọ na-alaghachikwute m dị ka a ga - asị na ọ bụ ubuntu: O
Chọpụta, adịghị na-agba ọsọ ya na a ọnụ ma na-agba ọsọ ya iji [Alt] + [F2] na voila 🙂
lee anya; (mechie ọnụ ya tinye ubuntu .. a na m eji mint mint
[Alt] + [F2] mgbe ahụ m tinyere nke a:
/ usr / bin / chromium-browser –user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, dị ka Gecko) Linux Mint 12 Chromium / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″%
o ga emepeere m windo chromium ohuru .. M mepere tab ma tinye ihe a
o gosiputara bu ubuntu kama Linux Mint AJAJAJAJA .. ihe nchọgharị m nwere mmụọ ọjọọ na canonical xD
Mechie niile Chromium ị nwere imeghe ma mee F2 ihe ọzọ
otu ihe a na eme .. o meghe m ya na Linux mint logo .. mana mgbe m mechiri ya meghee ya ozo, o gha egosiputa ozo
Kedu ihe m ga - eme iji dozie onye ọrụ ọrụ? Ebe oburu na m mepee ya site na F2 ma obu site na onu ya gosi m sistemm a m ji eme ihe ma mgbe m mechiri ihe nchọgharị ma meghee ya ozo o na egosi m ubuntu
Echere m na idezi faịlụ ahụ:
ok, olee otu m ga esi dezie ya .. ebe o meghi ihe obula maka njeghari, o dighi eme ihe obula maka F2
N'ikpeazụ enwere m ike inweta ya ka ọ rụọ ọrụ site na enyemaka nke Jhalss na enyemaka nke Onye Ọrụ 🙂
Uff… fuck at the end, olee otu i si mee ya na njedebe?
Dị mfe na ọnụ m tinye:
[see okwu] chọta chrome.desktop [/ see okwu]
ma dezie ihe ndị a.
[see okwu] sudo nano /usr/local/share/applications/google-chrome.desktop=/quote]
Chọọ maka akara "Exec = / opt / google / chrome / google-chrome" ma hapụ ya dị ka ndị a.
[see okwu] Exec = / opt / google / chrome / google-chrome –user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit / 536.5 (KHTML, dị ka Gecko) Fedora Chrome / 19.0.1084.52 Safari / 536.5 ″% U [/ see okwu]
Malitegharịa ekwentị Chrome na Onye ọrụ ọrụ gị ọrụ 🙂
AAHH !! ok mma daalụ much
Ana m tweeting ya ugbu a hahahaha.
M na-agbalị ọzọ
Ndewo, enwere m Debian LXDE na distro anaghị amata m. Agụrụ m ihe ndị gara aga mana enweghị m ike ịhazi ya! Na ọnụ sudo nano /usr/local/share/applications/google-chrome.desktop ọ bụ ihe efu ma amaghị m otu esi etinye ya. Ihe enyemaka ma ọ bụ abụọ?
Enwere m ike, mana m mere ka ọ dị iche.
Fuck ka di ojoo, anam eji Chromium
Zaghachi Alejandro Mora
Ide site na Konqueror, Kubuntu 11.10.
Mgbe m gbusịrị aghụghọ a, Chromium 18.0.1025.168 m anaghị arụ ọrụ, ọ gwara m:
"KDEInit enweghị ike ịmalite" usr / bin / chromium ".
N'okwu m, aghaghị m idezi faịlụ ahụ
Amaghị m ma ọ bụrụ na m ga-agbanwe ihe na mgbakwunye na "/ usr / bin / chromium-browser".
N’agbanyeghi na emeghim usoro a, enweghi m Chromium.
Enwere m olileanya na ekwesighi m itinye ya ọzọ, ka m ghara ida oge m chebere ...
Enyemaka ọ bụla iji weghachite Chromium?
Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ọdịnaya nke faịlụ ahụ ị gbanwere ebe a - » http://paste.desdelinux.net
Iji nwee ike inyocha ya nke ọma.
Aga m eji ya tụnyere nke m ebe a, anyị ga-ahụkwa ihe dị njọ na ya.
Aga m ekwupụta nke ahụ, na ha kekọrịta faịlụ iji hụ ...
M ugbu a (echefuru aha ya):
Mana echere m na edozila m ya.
Agbanwere m ụdị Chromium nke aghụghọ (Chromium / 14.0.835.202) maka nke m (Chromium / 18.0.1025.168), daalụ na enwere m mkpachapụ anya ide ụdị m tupu… Ọ dịkwa ka m nweela Chromium ọzọ… na mgbe m meghere ya, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ...
Ma aghụghọ ahụ anaghị arụ ọrụ maka m, ọ na-agwa m n'elu na m nwere Ubuntu, dịka ọ na-agbaso aghụghọ ahụ.
M na-ekwe ka ọ bụrụ, ka m ghara ịgha ya ọzọ.
Ndụmọdụ kubuturos, emetụla ihe ọ bụla aka.
Daalụ maka ilekọta m, admin na aha dị iche 🙂
HAHAHAHAHAHA otu m si chịrị ọchị na njedebe nke «iju aha ha»…. LOL !!!!
N'ihi eziokwu ahụ bụ na aha otutu m adịghị mfe dị ka m chere haha ​​... Ọ dị mma izute gị, aha m bụ Alejandro 🙂
N'ezie, mgbe edere post a, Chromium enyeghị nsogbu maka igosi na ọ bụ ụdị dị iche, amaghị ihe kpatara o ji nwee nkọwa a ugbu a. O_O ...
Tinye Kubuntu na UserAgent ọ gwa gị na ị na-eji Ubuntu? Lelee nke ahụ, ọ bụrụ na m ga-elele koodu ahụ ọzọ iji hụ ahụhụ ọ bụla m tụfuru.
I putara igbanwe "Debian Chromium /" ka "Kubuntu Chromium /"?
Aga m anwale ya, mana m na-atụ ụjọ na ịmalitegharị Chromium ga-agbagha ọzọ.
Dika m kwuru n'elu, abum nwoke, aha m malitekwara na A ...
HAHAHAHAHAHA otu m si chịrị ọchị na ngwụcha nke "aha ọzọ admin"…. LOL !!!!
N'ihi eziokwu ahụ bụ na aha otutu m adịghị mfe dị ka m chere na ọ dị mma… izute gị, aha m bụ Alejandro
Hapu “ihendori” nke Aliana bu nwoke xD xD
HAHAHA ị maara na m na-emeso onye ọ bụla nke ọma haha
Ana m atụ aro: ikekwe ị ga-agbakwunye na aghụghọ na ha gbanwere v. Chromium nke koodu nke ha etinyela ...
Gbanwere "Debian Chromium /" ka "Kubuntu Chromium /", na ihe ọ bụla. Ọ na-agwa m na m nọ na Ubuntu.
Wepu kpam kpam na "Debian Chromium /" na "Kubuntu Chromium /". Onweghị ihe.
Ugbu a enwere m ike ịmepe Chromium naanị site na njikwa ahụ, n'agbanyeghị na nke ahụ bụ nsogbu Kubuntu / KDE nke m ga-edozi mgbe ọ masịrị m.
Ma ọ dịkarịa ala ị maara na ọ bụ Chromium, ihe bụ ihe.
Anyị na-ahapụ ya ugbu a, anyị agaghị arahụ maka obere nkọwa.
Ogbogbo 3 dijo
mmmm, abum ezigbo onye na aru firefox, mana m na enye chromium ohere, nke bu eziokwu bu na achoputara m na o na-eji uru nouveau eme ihe karie Firefox. Cheers
anwale na chakra
M nwere Chakra arụnyere na Google Chrome ma enweghị m ike ịnweta Onye ọrụ na-arụ ọrụ, onye mere ya biko nyere m aka? Inwe ekele site ugbu a
na-anwale Debian + Google Chrome 15
na / usr / share / ngwa enweghi google-chrome.desktop
n'ezie faịlụ ahụ dị na /opt/google/chrome/google-chrome.desktop
nsogbu m bu n'itinye akara nke na-eduga na Debian kemgbe n'ime http://www.useragentstring.com/pages/Chrome/ naanị ahịrị pụtara maka Ubuntu, Windows na Macosx
ọma, na openSUSE ọ na-arụ ọrụ na-enweghị na-akpụ akpụ ihe ọ bụla, ma anaghị m eji chrome, ọ bụ chromium
Zaghachi na Hilojack
Nwalee onye ọrụ ọrụ ...
Ka anyị hụ ma ugbu a xD
Atụmatụ ule B ...
Atụmatụ ule C, ọ bụrụ na ọ mara LXQt
Nwalee onye ọrụ ọrụ na maxthon ...
Mgbe emesịrị chromium, emegharịrị ihe eji eme omenala, yabụ ana m anwale ọzọ ...
Nwalee mgbe mmelite
Ule 2: v
Nwalee onye ọrụ gị na qupzilla
Ma ugbu a ee?
Na-eleba anya mmelite ohuru na qupzilla
ule nwale onye ọrụ nnwale
Nwale Ule Nnwale ule ule ule
nyocha onye ọrụ nth
Jikọọ modem 3G site na iji Sakis3G
Mepụta ihe nchọgharị faịlụ maka Thunar na Zenity